TTSweet: အန်တီဆွိနဲ့ အိမ်ရှင် အိမ်ငှါး ဒရမ်မာ (၁)...
Posted by T T Sweet at 2:50 PM
Mon Petit Avatar April 9, 2011 at 3:13 PM
မမ ကိုယ်စားစိတ်မောလိုက်တာနော် အပိုင်းနှစ်ကိုမျှော်နေပါသည်
သိချင်စိတ်များတဖွားဖွားပေါ်နေပါသဖြင့် လက်ညောင်းနေသော်လဲရေးပေးပါရန် တောင်းဆိုပါသည်ခင်ဗျား။
ညယံ April 9, 2011 at 3:52 PM
အိမ်ရှင် ၊ အိမ်ငှါးကို ဖတ်ရတာ တစ်မေ့တစ်မောကို ဖြစ်ရော။
အပိုင်းနှစ်ကိုလည်း လည်ပင်းညောင်ရေအိုး ဖြစ်ပြီး မျှော်နေမယ်နော်။
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! April 9, 2011 at 5:17 PM
ဟုတ်တယ်နော် အိမ်ရှင်၊ အိမ်ငှား ပြသနာတွေကလည်း ....
rose April 9, 2011 at 6:49 PM
တီဆွိရေ... အစ်မနဲ့ ရို့စ် တူတယ်။ အိမ် သံယောဇဉ် ကြီးတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် တော်ရုံတန်ရုံဆို အိမ်၊ နေရာ မပြောင်းချင်ဘူး။ အစ်မတို့ နောက်ဆုံး ဘယ်သူ့ကို ငှားလိုက်လဲ ဆိုတာ သိချင်နေပြီ။ မြန်မြန် ရေးနော်။ မကြာနဲ့း)
ကျောက်ကုလားလေး April 10, 2011 at 4:05 AM
Shinlay April 10, 2011 at 4:10 AM
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) April 10, 2011 at 6:50 AM
အစ်မဆွိတီ အိမ်ငှားဇာတ်လမ်းက တကယ်စိတ်ဝင်စားစရာဘဲ
ဘယ်သူနဲ့ တည့်မလဲလို့ ရင်တစ်ထိတ်ထိတ်နဲ့ ဖတ်နေတာ
ကောင်းခန်းတော့ ရောက်နေပြီး)
စူးနှယျလေး April 10, 2011 at 7:08 AM
မယ့်ကိုး April 10, 2011 at 11:08 AM
ဇာတ်လမ်းလေး အမြန်ဆုံး ရှင်းပါစေ မမ။
mgchaint April 11, 2011 at 8:49 AM
Yesterday (10 Apr), her wireless modem and router has intermittent problem, she could not have internet access as of now. She could only carry on write the story after she will be SYD.
Sorry for not continuing the blog.
Today, technician from Singtel will come home and fix it. Hope my connection will be recover soon. Thanks for encouragement. I want to continue this post ASAP.
ခနွဲ April 11, 2011 at 2:36 PM
အပိုင်း ၂ ကို မျှော်နေကြောင်း
Oh! You are still in SG!! I thought you moved to Aussie already. That's why asking about JU JU's life in Aussie.
AMK April 11, 2011 at 10:40 PM
တီတ်ီဆွီ အိမ်ကလေးက သိပ်လှတယ်နော် ပြင်ထားဆင်ထားတာ
Anonymous April 12, 2011 at 1:41 AM
Dear မဆွိတီ, Believed , U r place can fetch easily $2400.00 per month.bcos, location and condition of u r house. Just for u r info one of my friend rent out as > $2300.00 per monthamonth ago. Located at J west Street 42 , Blk 486.
ဝက်ဝံလေး April 12, 2011 at 8:12 AM
ခေါင်းကို ချာချာလည်မူးတွားရမယ် ဒေါ်ဆွိတီရယ် ..
များက အဲဒါတွေ သိပ်နားလည်တာမဟုတ်ဘူး ဆိုတော့
နားလည်လည် မလည်လည် အစအဆုံး ဖတ်သွားတယ် သိလား
ဆက်ရေးနော် မျော့နေမယ် သိလား
T T Sweet April 12, 2011 at 9:08 AM
၀က်ကလေးရေ ... ချောတီး ချောတီး တီဆွိလည်း ရေးချင်ဇောနဲ့ ဖြစ်သမျှအကြောင်း နတ်သံနှောလိုက်တာ အတော်ရှည်သွားတယ်။ ဖြစ်ပျက်သမျှအကုန်ရေးချင်တာဆိုတော့ ဘယ်လို အတိုချုံးရမလဲမတိဘူး။ ငယ်ငယ်က 1st year လောက်မှာ သင်ရတဲ့ စာကို အတိုချုံးရေးနည်းက ဒီလိုပို့စ်တွေ အတွက် အသုံးဝင်မယ် .... ဟားဟား
ရေးတာရှည်သွားတဲ့အတွက် ပိတ်သတ်ကြီးအား တောင်းပန်ပါ၏။ နောက်ပို့စ်ကို တိုအောင် ဘယ်လိုရေးရမလဲ မသိဘူး။ ကြိုးစားကြည့်ပါ့မယ်။